Vao mialoha ny fotoam-pialan-tsasatra dia maro ireo ray aman-dreny no manomboka tsy misafidy sy manamboatra valim-bolo, fa manomana ihany koa ny antontan-taratasy ilaina ho an'ny tenany sy ny zanany.
Androany any amin'ireo firenena mandroso indrindra eto amin'izao tontolo izao dia misy fotoana ahafahana mahazo ny pasipaoronao manokana ho an'ny zaza hatramin'ny andro voalohan'ny fiainany. Mandritra izany fotoana izany, ny reny sasany sy ny papa, noho ny antony samihafa, dia maniry ny tsy hanana antontan-taratasy manokana ho an'ny zanany , fa mba hampiditra ny angona ao amin'ny pasipaorony manokana.
Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia hiezaka ny hahatakatra ilay fanontaniana sarotra momba ny fanoratana ankizy, anisan'izany ny zaza vao teraka, ao amin'ny pasipaoron'ny ray aman-dreniny ao Rosia sy Okraina.
Ahoana ny fomba fitaterana ankizy iray ao amin'ny pasipaona vahiny any Okraina?
Ny fanoratana zaza tsy ampy taona ao amin'ny pasipaoron'ny vahiny na reny, dia tokony ampiharina amin'ny Departemantan'ny Visa sy ny Fanoratana (OVIR) an'ny Sampan-draharahan'ny Fikirakira An'i Okraina. Amin'ity tranga ity dia mila pasipaoro manan-kery avy amin'ny iray amin'ireo ray aman-dreny ianao, pasipaoro anatiny ary taratasy fanamarinana zaza vao teraka. Ankoatr'izay, tsy maintsy mandoa hetra amin'ny 80 hryvnia ianao.
Ho an'ny ankizy 5 ka hatramin'ny 14 taona, ankoatra izany, dia tsy maintsy hanome sary 3 ianao, ny iray amin'ireo dia tafiditra ao amin'ny pasipaoronao. Ho an'ny ankizy hatramin'ny faha-dimy taonany, ny fakàna sary dia tsy azo atao, saingy tokony ho raisina an-tsaina fa ny masoivohon'ny firenena sasany dia mety handà ny hametraka visa amin'ny tsy fisian'ny sary ao amin'ilay rakitra.
Ny tanora eo amin'ny faha-14 taonany dia takiana amin'ny fanoratana ny dian-dry zareo ary tsy mifanaraka amin'ny pasipaoron'ny ray aman-dreniny.
Miditra amin'ny pasipaoro ve ry zareo any Rosia?
Ao amin'ny Federasiona Rosiana, ny fomba fanoratana ankizy ao amin'ny pasipaoron'ny papa na ny reniny dia efa lany andro. Ankehitriny, na dia ireo ankizy faralahiny indrindra aza dia voamarina amin'ny pasipaorony manokana, saingy amin'ny tranga tsy fahita, ny ray aman-dreny dia te-hiditra ao amin'ny zaza ao anaty antontan-taratasy. Avy eo dia holazainay aminao hoe aiza no ahafahanao miditra amin'ilay zaza ao amin'ny pasipaoron'ny ray aman-dreninao any Rosia, amin'ny fotoana ahafahana manao izany ary inona ny antontan-taratasy ilainao.
Voalohany aloha dia tokony atao fa ny fisoratana anarana amin'ny zaza madinika dia tsy misy afa-tsy ho an'ny pasipaorin'ny modely efa hatry ny ela, 5 taona. Mandritra izany fotoana izany, maherin'ny 80% -n'ny mponina ao amin'ny Federasiona Rosiana, izay raketin'ny pasipaoro vahiny, dia manana pasipaoro miaraka amin'ny informatika elektronika, ny fahamendrehana dia 10 taona.
Raha manana pasipaitra efa tranainy ianao, dia afaka mifandray amin'ny sampan-draharahan'ny Federasiona misahana ny fifindra-monina mba hameno ny angon-drakitra iray amin'ny ankizy iray na taona iray, fa hatramin'ny 14 taona. Mba hanaovana izany dia mila sary 2 amin'ny zaza ianao ary ny mari-piterahany, ary koa ny tapakila ho an'ny fandoavam-bola ny adidy amin'ny fanjakana eo amin'ny 500 roubles.
Ny fotoan'ny fisoratana anarana amin'ity fomba fitsaboana ity dia eo amin'ny 2-3 herinandro, nefa mety ho mihena amin'ny fampiharana ny olom-pirenena.
Zavatra vita tanana
Fiombonana taorian'ny batisan'ny zaza
Fotoam-pivoriana fotoam-bavaka amin'ny ankizy - hevitra
Ahoana no ataon'ny ankizy milomano?
Ny fahasamihafana eo amin'ny ankizy 2 taona
Ny asa tanana momba ny foto-kevitra hoe "rano"
Fialonana eo amin'ny ankizy
Ahoana ny fomba hanamboarana an-tsokosoko amin'ny taratasy?
Dinosaurs ho an'ny ankizy
Akanjo vita amin'ny akanjo
Ahoana no ahitanao ny fahaiza-manaonao manenika anao?
Ampahany amin'ny fatin'ny vatana
Sakafo mamy fofona - recipe
Mijoroa amin'ny TV
Rosehip Mey - Areti-mahadomelina sy fanoherana
Laika any Siberia Andrefana
Ahoana no handoavana lanja aorian'ny sezareana ary esory ny vavony?
Garderobe misy fitaratra
Ny saka-pasitera amam-panomezana - ny fomba mahavariana mahasalama avy amin'ny serealy, legioma na katsaka
Azonao atao ve ny manova ny anjaranao?
25 sary, izay mahamenatra ireo mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpanjakan'i Grande-Bretagne
Trout miaraka amin'ny saosy